के चाउमिन-पिज्जा खानुहुन्छ ? होसियार मुटुरोगदेखि बाँझोपनासम्म हुने खतरा - Mobile Pati Online
के चाउमिन-पिज्जा खानुहुन्छ ? होसियार मुटुरोगदेखि बाँझोपनासम्म हुने खतरा
१४ फाल्गुन २०७४, सोमबार १३:२०
तपाईं पनि फास्टफुड र बजारमा भेटिने ‘रेडी टु इट फुड’ को शौखिन हुनुहुन्छ ? यदि हुनुहुन्छ भने तपाईं जानेर, नजानेर मोनो सोडियम ग्लुटामेटको भरपुर सेवन गरिरहनुभएको छ ।
मोनो सोडियम ग्लूटामेट अर्थात एमएसजी स्वास्थ्यका लागि कति खतरनाक छ भन्ने तपाईंलाई जानकारी छैन होला ।
यदि तपाईं प्याकेटमा ‘नो एडेडे एमएसजी’ को लेवल देखेर यसलाई सुरक्षित मान्नुहुन्छ भने पनि तपाईंलाई कम्पनीहरुले वेवकुफ बनाइरहेका छन् ।
-यसको लगातार प्रयोगले माइग्रेनदेखि टाउको दुख्ने समस्या उत्पन्न हुन सक्छ ।-source onlinekhabar